Commun.it: Nyore Twitter Nharaunda Management | Martech Zone
Commun.it: Nyore Twitter Nharaunda Management
Vhiki rino, ndakakokwa kuti nditaure pa Smartups (Yakangwara Kushambadzira + Startups) nemuvambi wayo, Tim Flint. Tim ndewemuno analytics guru. Nhaurirano yangu yaive pakuvandudza uye ini ndataura nezvazvo kunyanya nezve analytics… asiwo mashandisiro akaita kukanganisa bhizinesi ranguwo.
Imwe nharaunda yandakabata yaive dichotomy yekuda manhamba kukwezva, asi wobva wafuratira kudzingirira manhamba uye kugadzirisa zvinotevera zvaunazvo. Yakananga ku Martech Zone, kukura kwedu kwakaputika patakamira kudzinganisa SEO tweaks uye yazvino nzira yekubatanidza-bait uye - pachinzvimbo - yakanangana nekupa kukosha kune vatengi vedu. Iko kukosha kwainyora zvakanyanya uye kuchipa zvakapfuma zvemukati.
Kugadzirisa nharaunda yako yeTwitter kunoda maturusi uye kushuma kuti uone vashandisi vaunoshuvira kubatana navo, teerera kune vashandisi vari kutsvaga zvigadzirwa nemasevhisi aunopa, kufuratira kana kusateedzera ma spammers nemaakaunzi asingaite, uye shambadza iyo yakanakisisa zvemukati zvinokwanisika kukwezva, kuchengetedza uye kushandura vateveri vakuru. Izvi ndizvo Commun.it inotarisira kupa vashandisi vayo kuburikidza nepuratifomu yayo.
Commun.it Inopa Zvinotevera Zvimiro
Akawanda maProfile Twitter - Manage akawanda Twitter profiles zviri nyore kubva kune rimwe chete dashibhodhi.
Team Members - Koka nhengo dzeboka rako kuti dzizadzise nharaunda yako.
Insights - Ziva anotevera, nekutenda uye nekupindura.
Monitoring - Enzanisa zvaunoita zvemagariro enhau, ziva zviri kushanda. Usapotsa kutaura kwakakosha.
Anotungamira Kushambadzira - Tarisa pane vako vepamusoro vanokurudzira nevatsigiri, usapotsa kwavo kuita, vatevere.
Manage Twitter Lists - kuvaka nharaunda yakabatana uchishandisa Twitter zvinyorwa. Govanisa zvinyorwa muzvikamu zvetsika.
Uchishandisa maturusi akaita seCommun.it, iwe unogona zvirinani kubata zvisingaite zvinotevera zvaunogona pane kudzingirira zvimwe. Dambudziko nedzidziso yefunnel ndeyekuti vanhu vanotenda kuti pasi peiyo fanera yakamira. Semuenzaniso, kana iwe ukawana 2% chiyero chekushandura, iwe unongofanirwa kuwana vamwe vashanyi kuti vawedzere kutengesa kwako. Taona kuti iyi haisi iyo nyaya zvachose… iwe unofanirwa kunge uchishandira kushandura vateveri vauinavo.
Tags: com.itvemunharaundaNharaunda MAnagementTwitter
Litmus: Vanhu Vanogona Kuverenga E-mail Yako Here?
Nei Bhizinesi Rako Rinofanirwa kunge Riri Nhare-Rakagadzirira Mahoridhe